फार्मास्यूटिकल मध्यवर्ती र एपीआईहरूको Phcoker प्रोफेशनल फ्याक्ट्री
सक्रिय औषधि मध्यवर्ती (एपीआई) मा विशेषज्ञता ईन्टरप्राइज
ISO9001: 2000 नियमहरू र सीजीएमपी मानकसँग अनुपालन।
अनुसन्धान र डी टीम
20 वर्ष औषधि उद्योगको अनुभव भन्दा बढी सम्बन्धित सम्बन्धित समर्थनको साथ।
नवीनतम वैज्ञानिक र प्राविधिक उपलब्धिहरु संग, Shangke उत्पादन धेरै प्रभावी र पर्यावरण अनुकूल छ।
हाम्रो ग्राहक सेवा टोलीले क्लाइन्टले समयको लागि उच्च स्तरमा पूर्ण टेक्निकल र वैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्दछ।
हाम्रो कोर उत्पादनहरू
1. Palmitoylethanolamide (PEA) सिंहावलोकन 2. Palmitoylethanolamide (PEA) के हो? 3. Palmitoylethanolamide लाभहरू - के म...
1. परिचय 2. रहस्यमय निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) 3. निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड र NAD + 4. पछिल्लो Res...
Phcoker एक पूर्ण उत्पादन प्रणाली संग म्याग्नेशियम L-threonate को एक पेशेवर निर्माता हो जसले थोक ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ...
गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड अवलोकन ग्यालेटामाइन हाइड्रोब्रोमाइड एक पर्चेको औषधि हो जुन अल्जाइमर रोगको डिमेन्शियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ ...
PRL-8-53 सिंहावलोकन PRL-8-53 को एक psychoactive औषधि को रूप मा hype 1970 को दशक को शुरु मा फिर्ता। निकोलस हान्सल, प्रोफेसर सी ...
साइक्लोस्ट्रैजेनोल सिंहावलोकन साइक्लोस्ट्रैजेनोल (सीएजी) लाई टी-65 as पनि भनिन्छ। यो एक प्राकृतिक टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड हो जुन एस्टरबाट लिइएको हो ...
निकोटीनामाइड राइबोसाइड (NR) र निकोटीनामाइड राइबोसाइड (क्लोराइड) निकोटीनामाइड राइबोसाइड (NR) क्लोराइड एन को क्लोरीनयुक्त रूप हो ...
Oxiracetam के हो? Oxiracetam एक रेष्टम परिवार बाट पुरानो nootropic पूरक हो। यो तेस्रो रेष्टम कम थियो ...
9-ME-BC के हो? --Me-BC (--Methyl-car-carboline) पनि 9-MBC को रूपमा चिनिन्छ एक β-carboline समूहबाट एक उपन्यास nootropic यौगिक हो। ...
अनुसन्धान र प्रयोगशालाहरू
हाम्रो कम्पनीको बारेमा नवीनतम जानकारी प्राप्त गर्न सदस्यता लिनुहोस्।